केदारनाथ सिंह, अनुवाद- सुदीप पाख्रिन -
- सफर पोखरेल - नदी एउटा दिशामा मात्र बग्छ । र पनि हजारौँ हजार वर्षदेखि चुपचाप त्यसरी बिना कुनै गुनासो कैयौ नदीहरु बगिरहेकै छन् । ऊ एउटा नदी हो । यो धर्तीमा एक पटकमा एकातिर मात्र घाम लाग्छ । र पनि केही नबोली घुमिरहेकै छ निरन्तर यो पृथ्वी । ऊ एउटा पृथ्वी हो...
लक्ष्मी न्यौपाने -
दुई दुई वटा छोरीकी आमा कसरी लेसवियन हुन्छ? हुनै नसक्ने हल्ला भनेर पत्याएकी थिइन। आज उसकै मिल्ने साथीले रोजेको जीवन जीउने मोड देखेपछि तीन छक्क परी। विनय र सत्तीश घनिष्ट साथी हुन् भन्ने राम्ररी बुझेकी सजनी कल्पनै नगरेको घनिष्टता देख्दा अवाक भई। दुवै कहिले पोखरा कहिले चितवन भनेर एक दुई दिन हराउँथे। हराउनुको रहस्य पनि बुझी। यहाँबाट अब कसरी उम्कने? कसरी छुटकारा पाउने भन्ने सोचमा तल्लिन भई। विनय र सत्तीशको चियर्सको आवाजसँगै चर्को हाँसोको फोहरा किचेन हुँदै उसको कानसम्म बज्रिरहेको थियो।
धर्म सापकोटा राजु -
उसले हल्लाइरहेको चम्चा टक्क रोकी। मलाई हेरी र भनी–तिमीजस्ता मान्छे मलाई मन पर्छन्। ‘मन पर्छन् मतलब?’ ‘साह्रै माया लाग्छ।’ विस्तृतमा
सन्तोष पौडेल -
'अनि हजुर! विदा मे हामी इस्तानबुल चक्कर मार्थ्यो। पुरा पयदल। दामोदरजी चिकेन केवाब खुब खियाउन्थ्यो। अनी बियर। बल्की हामी बियरमे मुह त के, हाथ पनि लान्थेन।' एक घण्टा यता बोलेको बोल्यै छन्। सेतो सर्ट लगाएको उनले नाम गिर्धारी यादव भन्छन्। पाइन्ट मुनी सर्ट घुसारेका छैनन्। खुट्टामा छालाको चप्पल लगाएका छन्। खुट्टा र चप्पल उस्तै देखिन्छन्। धुलै-धुलो। मेरो जुत्ता पनि धुलाम्य छ।
कहिलेकाहीँ बल्झाइदिन्छन् घाउ
बर्जित ईतिहासका काला धब्बाहरुले
तर पनि बिर्सिँदैनन्
सुनाहाङ वालिङ खोटे पासुङहरुलाई
कृष्ण अविरल -
पाइखानाबाट फर्केपछि नम्रता भान्सामा पसिन्। अनि, आमासँग भनिन्, ‘म त त्यो केटासँग बे गर्दिनँ।’ ‘हन, के भन्छे यो केटी?’ नाङ्लामा आरी राखेर निबुवा साँधिरहेकी नन्दिनी झर्किइन्, ‘बुवाले हेरेको त्यति राम्रो केटोसँग नगरेर कोसँग गर्छेस्?’ ‘गोविन्दबाहेक अरुसँग त म बे गर्दै गर्दिनँ,’ नम्रताको मनमा दबेर बसेको भाव बाहिर निस्क्यो।
खगेन्द्र संग्रौला -
ढाड भाँच्चिने गरी ढुङ्गा बोकेर, काँध खुत्तिने गरी काठपात ओसारेर हामी इस्कुल बनाउँछौ, हाम्रै छोराछोरी पढ्न पाउँदैनन्। ज्यान हत्केलामा राखेर घुँडो र मुन्टो गर्दै हामी धरानदेखि नुन तेल खेप्छौँ, हामीले नै अलिनो र खस्रो खानुपर्छ। गोरुझैँ रातदिन जोतिएर हामी कमाई गछौँ, हाम्रा जहान छोराछोरी भोकभोकै गर्छन्। भन्त दले, यो कस्तो निसाप हो? मैले आजसम्म एक मुरी पसिना बगाएँ हुँला। तर आफ्नोलागि फुटेको कौडी जोड्न सकिनँ। मेरा जम्मै पसिना मुखियाका ढुकुटीमा गए, मुखिनीका कन्तुरमा थुनिए।’ जुरानसिंहले जिन्दगी भरिको गुनासो एकै सासमा पोख्यो।
सर्वेश्वरदयाल सक्सेना, अनुवाद-सुदीप पाख्रिन -
प्रायसः मलाई महशुस हुने गर्दछ
कि हरेक कुराको एउटा अर्थ हुने गर्दछ
यहाँसम्म कि घाँस हल्लिनुको पनि
हावा झ्यालसम्म आउनुको,
र किरण पर्खालमा
चढेर पर जानुको।
डा. भीष्मकुमार भूसाल -
तिनका पनि स-साना फूलबारी थिए
छोरो रोबटहरूले पकाएको पिज्जा खाँदै
अझै प्रेम पोख्छ,
यहाँ, हतार गुडिहिँड्ने फराकिलो बाटो,
थकाई पौडिने स्विमिङ पुल,
पसिना सुस्ताउने समुन्द्र किनार
ऋतुहरू झुक्किने उज्याला रात
खुब मज्जा छ यहाँ
'साँच्चै भनेको बुबा
मेटिदिने हो भने सिमानाको रङ
यो पृथ्वीको माटो के फरक छ र?
वसन्त विवश आचार्य -
‘यसलाई त केटीले आफैँ प्रपोज गर्छन् यार,’ केटाहरु थुक निल्ने गतिलो बहाना बनाउने गर्छन। तर टाउकै फोडे पनि के हुने हो र? अस्ति स्ट्याटस लेखेको थियो फेसबुकमा–तिमीजस्तै पछ्याउनेहरु धेरै भए जीवनमा आउ, यो अनुहारमा एसिड छ्यापिदेउ, म तिम्रो मात्रै हुन चाहन्छु।’
विलीयम शेक्सपियर -
अनि उनको शिरमा सुनका रेशा
होइन काला तार उम्रेका छन्
मैले सेता, राता बुट्टेदार
गुलाफहरू देखेको छु
तर त्यस्ता कुनै पनि गुलाफ
आजसम्म उनको गालामा
फक्रेको थाहा छैन
कतिपय अत्तरमा कस्तो
मनमोहक सुगन्ध हुन्छ
तर उनको श्वास त ठुस्स
दीलिप कुँवर -
गुँरासका रिफ्लेटहरु परेको मेरा आँखालाई
सहरको श्मशानतिर डोहो¥याउँदा,
आँखिभौंलाई घरको ढोकामा झुन्ड्याएर
काँपेको अँगालाले मलाई बेस्सरी
कसेकी थिइन् आमैले–
शालिकहरुको उपत्यका किचकन्याहरुको हो भनेर,
तर, मैले मानेन।
‘उसको अर्थात् यो मुसहरी टोलको अर्थात् उनीहरु जस्ता श्रमजीवीहरुको समस्या कसले हेर्छ त?’ घुरको धुवाँले पिरो हुँदै गएको आँखा मिच्दै ऊ फेरी पनि घोरियो–‘रोजी– रोटीको समस्या कसले टार्न सक्छ? नन्दन रायले वा माधोबाबुले वा शर्माजीले वा अरु? ’अहँ। फलाना थोक गर्छु, तिलाना थोक गर्छु भन्नेहरु नजितुञ्जेल मात्रै डिङ हाक्ने हुन्, जितिसकेपछि त उल्टो लोप्पा ख्वाँउछन्। माछो, माछो भ्यागुतो!
कसैको अलिकति गाली र नमिठो वचन सहने क्षमता नभएको मलाई उसले सिधै मुर्ख भनिदिई। परिचय नै भएको छैन सिधै इडियट भन्छ, कस्ती केटी हो? सोचेर तलदेखि माथिसम्म उसलाई हेरें। सर्ट, पाइन्ट र कोट लगाएकी ऊ निकै भद्र देखिन्थी।
निजार कब्बानी (अनुवाद: सुमन पोखरेल) -
मैले भनें– म थाकेकी थिएँ, यसो पल्टेको भुसुक्कै निदाएछु । ‘तिमी बद्लियौ।’ ‘मेल्वर्नको मौसम जस्तै भयौ भन्न खोजेको कल्याण?’ ‘तिमी नजिस्क त मसँग।’ ‘हुन्छ, त्यसो भए अर्कोसँग जिस्किन्छु नि त।’
प्रोल्लास सिन्धुलीय -
गएको वैशाखमा गिरानचौरतिर बिहे भएको रहेछ मस्यौरीको। रामदाइ घर फर्किएको खबर सुनेर मामाघर राउतगाउँ जाने बहाना बनाएर आएकी रहिछन् यता। हुनु–हुनामी भइसक्यो। रिसाएर अथवा रोएर अब केही हुनेवाला थिएन। 'के गछ्र्यौ त अब?' रामदाइले सोधे। 'तिमी जे भन्छौ, त्यही गर्छु... !' उनले आँसु पुछ्दै भनिन्। 'जान्छ्यौ त मसँग?' रामदाइले खिरिल्याएर सोधे। मस्यौरीले मुन्टो हल्लाइदिइन्।
तराईमा औलो उन्मूलन भयो। पहाडबाट मान्छे ओइरिए। त्यसबेला दाङका फाँटमा धान झुलेका थिए। पहेलपुर तोरी फुलेका थिए। र, तिनकै रङमा भूमिपुत्र थारूका अबोध मन खुलेका थिए। पहेलपुर तोरीको फूलसित बाजी लाग्दै जुग्री–जग्गु प्रेमको कोपिला लागेको थियो। दाङ झरेका शासक खलकका अाँखा पहेलपुर फाँटमा परे। थारू र अक्षर, थारू र राज्यसत्ताबीच गोरु बेचेको साइनो पनि थिएन। त्यसैले ‘शासक खलक’लाई ती फाँट कब्जा गर्न कुनै आइतबार कुर्न परेन।सिङ्गो पञ्चायत नै तिनका भएपछि छिनभरमै सारा फाँट आफ्नो बनाए। हेर्दाहेर्दै पहाडबाट झरेका शासक खलक जति जिम्दार भए भने थारू भूमिहीन।
बोक्सी त यो कानुन हो
जसले टोकेर मार्छ
र औँलामा बत्ती बाल्दै
लखेट्छ हरेक गरीबहरुलाई।
एउटा नाङ्गो प्रश्न घुमिहिँड्छ
त्यसको हरेक अङ्ग किन छैन सुन्दर?
किन लोभ लाग्दैन
त्यसको कामुक शरीर देखेर
म देउता भएसी
माघी पर्वमा आउँछन् आउँदैनन् मलाई कम्लरी लिन-मालिक
म देउता-मालिकलाई मन पर्छ पर्दैन
वा राख्छन् मालिकको देउताले म देउतालाई छुट्टै कम्लरी
वा हुन्छु म देउताहरूको देउता कम्लरी।
कृष्णराज सर्वहारी -
जमुनासिंहले जुँगामा ताउ लाउँदै भने, ‘तपाई पनि साहुजी। यी सोझा थारूहरू यस्तै हुन क्या। भन्नु र गर्नुमा त फरक छ नि। उसकी छोरीलाई भोलि ल्याउन त दिनोस्। कसरी काम गराउनुपर्छ, हामीले जान्या छ। उसलाई अब कुनै थप रकम पनि दिनुपर्दैन। देख्नु भएन बोनसमा रक्सी र माछा दिएको। त्यही उसको छोरीको वार्षिक ज्याला पनि भयो। उसको छोरीको भाग्यमा बोर्डिङ त के सरकारी स्कुलमा पनि पढ्न लेखेको छैन। विचरी कसरी पढ्छे। हा हा हा...! ठूलो स्वरमा हाँस्दै जमुनासिंहले अगाडि भने, ‘खै ल्याउनुहोस् एक बोत्तल बियर र फ्राइ माछा। हामीले पनि त माघी मनाउनुप¥यो नि।’
अभिमन्यु निरवी -
सबै बोटबिरुवामा पलाएको ससाना पालुवा देखेर मभित्र पनि नयाँ पालुवा पलाउँथ्यो। यस्तो लाग्थ्यो कि सर्पले झैं म आफू पनि काँचुली फेरिरहेछु। त्यही खुशीले फुरुँग भएर पल्लवी पनि बेलाबेलामा मलाई सताउँथी। एउटा नयाँ वर्षमा उसले मैले नसोचेको कुरा गरी। उसले एउटा रातो गुलाबको फूल भएको पोष्टकार्डमा माया झल्काउने एकदुईटा सायरी लेखेर सिधै मलाई दिई। डराईडराई मैले गोजीमा राखेँ र अलि वर खेतमा आएँ।
बिपीले भने, ‘बाबु! कम्युनिज्म नराम्रो होइन तर त्यस पद्धतिमा जनता स्वतन्त्र हुँदैनन्।’
बिपीको निवासबाट फर्किएपछि मेरो मनमा ठूलै द्वन्द्व चल्यो। कतै काङ्ग्रेस नै ठीक त होइन? कम्युनिस्ट भएर जीवन बर्बाद पो हुने हो कि? यस्ता थुप्रै तर्कना मनमा नउठेका होइनन्। तर अन्तमा बिपीको मीठो कुरा सुनेर भ्रमित हुनुहुन्न भन्ने निष्कर्षमा पुगेँ।